Mihanaka tanteraka ao Toamasina: 14 matin’ny kitrotro, 53 mbola tsaboina | NewsMada
Mihanaka tanteraka ao Toamasina: 14 matin’ny kitrotro, 53 mbola tsaboina
Mihazakazaka be ny fahafatesana nateraky ny valan’ aretina kitrotro raha ny hita eto Toamasina. Mahatratra 30 isan’andro ireo zaza miditra hopitaly. Misy kosa ireo mahazo fizahana ary afaka mody fa miverimberina manao fanaraha-maso ny fizotran’ny fahasalamany. Mijanona ao amin’ny hopitaly kosa izay hita fa misy fahasarotany. Hatramin’ny fotoana nanaovana ny fanadihadiana teny anivon’ny hopitalin-jaza tetsy amin’ny Hopitalibe Toamasina, ny asabotsy lasa teo, nahatratra 14 ny maty ary mbola nahitana ankizy valo naiditra amin’ny efitra fameloman’ aina noho ny fahasemporana mahazo azy, zaza 53 hafa kosa mbola manaraka fitsaboana. Ny fanadihadiana hatrany no nahalalana hatramin’ny fiandohan’ny volana novambra ka hatramin’ izao fotoana izao, nahatratra 1 037 ny ankizy narary efa nandalo teny anivon’ny CSB II teto Toamasina Renivohitra, araka ny nambaran’ny dokotera Zara Hassanaly Patrick, medecin Inspecteur Toamasina I. 3 000 kosa ny efa nandalo tao amin’ny Hopitalibe avy hatrany, raha ny fanazavan’ ny dokotera Rakotoarisoa Heriniaina.
Manao ranolava ny filazam-pahafatesana hita voasoratra etsy amin’ny sampana misahana izany anivon’ny kaominina ambonivohitr’ i Toamasina. Nanomboka tamin’ny fiandohan’ny taona ka hatramin’ny zoma 11 janoary teo, 73 filazana fahafatesana ary mifangaro ao avokoa fa tsy noho ny valan’ aretina kitrotro fotsiny.
Ny ray aman-dreny no hanatona ny CSB
Momba nyaretina kitrotro, ho an’ ny distrikan’ i Toamasina II, kaominina valo amin’ny 18 no ahitana ity valan’aretina ity, 119 ireo fantatra fa efa marary ny kitrotro any an-toerana amin’izao. Ahitana soritr’ aretina hatrany Brickaville, Mahanoro, Vatomandry izay efa nahazo fanafody avy amin’ny Spat. Hisy ny fanaovam-bakisiny, manomboka anio ka hatramin’ny 18 janoary ho avy izao ho fiarovana ny zaza amin’ny kitrotro. Hafa kely ity fanaovam-bakisiny ity, tsy ireo mpanentana ara-pahasalamana miisa 128 eo anivon’ny distrikan’ny fahasalamana Toamasina I sy Toamasina II intsony no mitety tokantrano fa ny fianakaviana tsirairay indray no hanantona ireo CSB sy ireo biraom-pokontany ary ireo sekoly hanao ny vakisiny. Ireo zaza mbola tsy voan’ny kitrotro sy ireo zaza efa sitrana voan’ny kitrotro ihany no azo atao ity vakisiny ity. Ireo mbola marary kosa dia miandry ny fahasitranany vao azo atao vaksiny. Mikendry hahavita vaksiny zaza 80 000 ny tompon’andraikitry ny fahasalamana amin’izao hetsika izao satria izay ihany no fiarovana ho an’ny zaza.
Misy reo sekoly manakatom-baravarana manahy ny fiparitahan’ny valan’ aretina kitrotro. Na misokatra aza ny sekoly, tsy mandefa ny zanany hianatra ny raiamandreny sasany, ao koa ireo manome toro-marika ny zanany tsy hifandray tanana sy hilalao amin’ny ankizy hafa eny an-tsekoly. Lasa mampisara-bazana ny samy ankizy ny valan’ aretina kitrotro.
Nanolotra fanafody ny IEM sosialy
Nisy fanolorana fanafody nataon’ny ekipa sosialin’ny IEM sy ny iraka manokan’ny filohan’ny Repoblika vaovao, Rajoelina Andry Nirina, ny asaboty maraina teo. « Maimaim-poana ny fanomezana ireo ho an’ny marary ary fiatombohana fotsiny izao fa mbola ho avy ny fanafody hafa”, hoy ny teknisianina misahana ny sosialin’ny IEM. Fanolorana fanafody andiany faharoa no nataon’ny seranan-tsambon’ i Toamasina ” Spat”, tamin’ny alalan’ny sampana misahana ny fifandraisana amin’ny maha olona sy ny departemantan’ny sampana fitsaboana .